Bogota dia mandray ny kaongresy faha-6 amin'ny Nightlife International
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Bogota dia mandray ny kaongresy faha-6 amin'ny Nightlife International
Ho an'ny taona faharoa misesy, ny tanànan'i Bogotá (Kolombia) dia hampiantrano ny Kongresy Nightlife International faha-6 sy ny loka Golden Moon faha-5 amin'ny 13 Novambra, miaraka amin'ny ExpoBar Fair Colombia faha-6, karakarain'ny Fikambanan'ny Nightlife Colombia, Asobares.
ExpoBar no hetsika fialam-boly manan-danja indrindra any Kolombia miaraka amin'ny mpanatrika 3.000 mahery ao anatin'izany ny solontenan'ny indostria, ny mpiasa, ny manampahefana ary ny mpanohana mamorona seha-pifanakalozan-kevitra ary misy ny vahaolana azo omena mifandraika amin'ny indostrian'ny fiainana any Kolombia. Ny toerana voafantina amin'ireo hetsika voalaza ireo dia Theatron Bogotá, izay lasa mpikambana volamena ao amin'ny International Nightlife Association.
Araka ny efa fantatrao, ny INA dia manao kongresy iraisam-pirenena isan-taona sy lanonana loka ary nanapa-kevitra ny hankalaza indray ny fanontana amin'ity taona ity miaraka amin'i Asobares sy ny ExpoBar Fair andiany faha-6.
Mandritra ny harivan'ny 13 Novambra, hikarakara ny faha-5 Golden Moon Awards ny International Nightlife Association izay anisany loka hafa, hivoaka ny lisitr'ireo "The 100 Best Clubs World 2019". Ny toeran'ny Club Best World amin'izao fotoana izao dia i Hï Ibiza no mipetraka.
Ny filohan'i Asobares, Andriamatoa Camilo Ospina Guzmán dia nanambara androany, "Faly izahay fa ny foara lehibe indrindra amin'ny fiainana alina any Kolombia dia miverina miaraka amin'ny kongresy momba ny fiainana alina manandanja indrindra eto an-tany hanao hetsika lehibe izay hisy akony lehibe eo amin'ny fiainana amin'ny alina manerana an'izao tontolo izao ”.
Araka ny tenin'Andriamatoa Joaquim Boadas de Quintana, sekretera jeneralin'ny International Nightlife Association, "Faly izahay mitazona ny hetsika fanao isan-taona miaraka amin'ny ExpoBAR, karakarain'ny fikambananay mpikambana ao Kolombia, Asobares. Te-hanao antso avo amin'ireo mpandraharaha amin'ny fiainana andavan'alina eto amin'izao tontolo izao koa aho handray anjara amin'ireo hetsika ireo, satria izy ireo dia hanisy fironana mankany amin'ny hoavin'ny sehatra misy antsika eo amin'ny sehatra manerantany ”.
Horohoron-tany lehibe no namely an'i Papua New Guinea sy ny Nosy Solomon, tsy nisy fandrahonana tsunami tany Hawaii
Ny FCM Travel Solutions dia manafaingana ny fizotran'ny teknolojia NDC manerantany miaraka amin'i Amadeus sy Saber